हिरोको भन्दा बढी पारिश्रमिक लिदै पुजा !! नेपालकी सर्वाधिक महंगी नायिका - Experience Best News from Nepal
सुरुमा अभिनेताहरुले आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने होड चलाए । त्यसपछि अभिनेत्रीहरुमा यो भुत चलेको छ । आजभोली नेपालका अभिनेत्रीहरुले पनि आफ्नो पारिश्रमिक भटाभट बढाउन थालेका छन् । नेपालको चलचित्रको बजारमा यति अचाक्ली बढेका हिरो हिरोइनलाई पाल्न सक्ने खान्की छ त ? नेपाली चलचित्रका शुभचिन्तक भन्छन्, ‘यो असाध्यै ठिक हैन, पारिश्रमिक वढाएर आफ्नो स्टारडम वढाउनु आत्मरतीमा रमाउनु बाहेक केहि हैन ।’ अहिले अनमोल केसीको ४५, प्रदीप खड्काको ४५, पल शाहको २५, विपीन कार्कीको २०, दयाहाङ राइको १५, सौगात मल्लले १० लाख पारिश्रमिक बुझ्छन् जस्ता खबर दिनदिनै मिडियामा आउने गरेका छन् । आधिकारिक उनिहरुले कति बुझ्छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैले बोल्न सकेका छैनन् ।